Aso Jehovah Adasefo Wɔ Hɔnankasa Hɔn Bible? | FAQ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bosnian Boulou Brazil Mmum Kasa Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Corsican Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Edo Efik English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Faroese Fijian Finnish Fon French Ga (Nkran Kasa) Galician Garifuna Georgian German German Mmum Kasa Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Mmum Kasa Isoko Italian Italy Mmum Kasa Japan Mmum Kasa Japanese Javanese Kabiye Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Low German Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mende Mfantse Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndonga Nepali Nias Norwegian Nzema Oromo Otetela Pangasinan Persian Peru Mmum Kasa Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russia Mmum Kasa Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Ticuna Tigrinya Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Welsh Xavante Xhosa Yoruba (Alata) Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Aso Jehovah Adasefo Wɔ Hɔnankasa Hɔn Bible?
Jehovah Adasefo dze nkyerɛase pii edzi dwuma dze esũa Bible no. Naaso, wɔ kasa ahorow a wɔakyerɛ New World Translation of the Holy Scriptures no ase akɔ mu no mu no, hɛn enyi gye ho dɛ yɛdze ɔno bɛyɛ edwuma. Siantsir no nye dɛ ɔdze Nyankopɔn ne dzin dzi dwuma, wɔakyerɛ ase pɛpɛɛpɛr, na no mu so da hɔ.
Ɔdze Nyankopɔn ne dzin dzi dwuma. Hɔn a wɔayɛ Bible no mu binom mmfa enyimnyam mma ne Kyerɛwfo no. Dɛ nhwɛdo no, Bible nkyerɛase bi bobɔ nyimpa bɔbor 70 bi a wɔboae ma wɔyɛɛ Bible no edzin. Naaso, dɛm Bible kor yi ara yiyi ne Kyerɛwfo, Jehovah Nyankopɔn no ne dzin fifi ne fã biara!
Dza ɔnye iyi bɔ ebira no, mbea mpempem pii a nna Nyankopɔn dzin no hyehyɛ wɔ tsetse nsaano nkyerɛwee no mu no, New World Translation no dze ahyehyɛ beebiara. Naaso, egyinatukuw a wɔbɔɔ mu yɛe no dze, wɔnnda no mufo no hɔn edzin edzi.
Wɔakyerɛ ase pɛpɛɛpɛr. Ɔnnyɛ nkyerɛase biara na ɔda Bible no mu nokwar nkrasɛm no ankasa edzi. Dɛ nhwɛdo no, nkyerɛase bi kyerɛ Matthew 7:13 ase dɛ: “Hom nhɛn abow tseaba no mu, osiandɛ abow a wɔdze kɔ hell no sõ, na ɔkwan a wɔdze kɔ mu no do fa yɛ mberɛw.” Naaso tsetse nsaano nkyerɛwee ankasa no dze kasafua “ɔsɛɛ” na ɔdze dzii dwuma, na nnyɛ “hell.” Binkɔhwɛ a asekyerɛfo no dze kasafua “hell” dzii dwuma osiandɛ wɔgye dzi dɛ wɔbɛyɛ emumuyɛfo ayakayakadze wɔ hellgya mu. Naaso dɛm nsusui no nngyina Bible no do. Ntsi, New World Translation no kyerɛ ase pɛpɛɛpɛr dɛ: “Hom nhɛn abow tseaba no mu, osiandɛ abow a ɔtsɛw na ɔkwan a ɔsõ nye dza wɔdze kɔ ɔsɛɛ mu.”
No mu da hɔ. Nkyerɛase papa biara dze, ɔnnyɛ dɛ wɔakyerɛ ase pɛpɛɛpɛr nko, na mbom no mu so da hɔ, na ne ntseasee nnyɛ dzen. Susũ nhwɛdo bi ho hwɛ. Wɔ Romefo 12:11 no, Christiannyi ɔsomafo Paul dze asɛmfua bi yɛɛ edwuma, a dza ɔkyerɛ ankasa nye dɛ “sunsum no nhur.” Osiandɛ dɛm asɛmfua no ntseasee mu nnda hɔ ntsi, New World Translation no kyerɛ ase ma ne ntseasee yɛ mberɛw. Ɔkã dɛ, ɔsɛ dɛ Christianfo “yɛ hyew wɔ sunsum mu.”
Sɛ yɛdze mbrɛ New World Translation no dze Nyankopɔn dzin dzi dwuma, wɔakyerɛ ase pɛpɛɛpɛr, na no mu da hɔ no to nkyɛn a, ɔsan so da nsew wɔ ɔkwan fofor bi do: Wɔkyekyɛ no kwa. Iyi ntsi nyimpa ɔpepem pii tum kenkan Bible no wɔ hɔnankasa hɔn kasaa mu, a hɔn a nkyɛ wonnyi sika a wɔdze bɔtɔ Bible no bi mpo kã ho.
Ebɛnadze Ntsi Na Jehovah Adasefo ayɛ New World Translation?
Ebɛnadze na ɔma dɛm Nyankopɔn Asɛm nkyerɛase yi yɛ soronko?
BIBLE HO NWOMA HO DWUMADZI
Wɔdze “Nyankopɔn Nsɛm” Krɔnkrɔn Ahyɛ Hɛn Nsa Dɛ Yɛnkyerɛ Ase​—Romefo 3:2
Jehovah Adasefo dze Bible nkyerɛase ahorow pii edzi dwuma wɔ mfrenhyia ɔha a abɛsen kɔ mu. Ebɛnadze ntsi na wɔkyerɛɛ Bible no ase kɔr Borɔfo kasa a wɔkã no ndɛ no mu?
Fa mona Fa mona Aso Jehovah Adasefo Wɔ Hɔnankasa Hɔn Bible?
Aso Wɔakyerɛ New World Translation No Ase Pɛpɛɛpɛr?